"Iziko leSixeko esiDala" Indawo yokuhlala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTara
Indlu ilele kumbindi wesixeko esidala saseMaribor.
Indawo inoxolo kakhulu, izolile kwaye kukho i-terrace entle onokuthi uphumle kuyo ngalo lonke ixesha lonyaka. Indlu isandula ukulungiswa kwaye ihonjiswe ngoku.
Ngenxa yendawo ekuyo kwindawo yabahambi ngeenyawo akukho ndawo yokupaka ngqo phambi kwendlu, nangona kunjalo kukho indawo yokupaka ehlawulwayo ebizwa ngokuba yiSlomškov trg, apho unokukhangela amaxabiso kunye neeyure zokupaka simahla kwi-Acess yeeNdwendwe.
Umbono kukwenza indawo ejikelezileyo ibe luhlaza kwaye izolile kangangoko. Yintoni eyenza eli fulethi libe lodwa sisitiya saso samatye esikwithafa kwaye siyinika i-Mediterranean vibe ekhethekileyo kwaye ngokuqinisekileyo iyindawo yokubambisa iliso kuye wonke umthandi wendalo.
4.95 · Izimvo eziyi-130
I-Maribor ayisiyo-capital kuphela yengingqi ye-Štajerska kodwa yaziwa nangobuhle bayo kunye nendalo yayo ekhethekileyo. Kuphela i-800m kude kukho ipaki yedolophu apho ungathatha khona uhambo lokuphumla, uhambe uye kuthi "i-Trije ribniki" yethu edumileyo - amachibi amathathu kwaye upholile ngeentsuku zasehlobo ezifudumeleyo . Ipaki ilele ngokuthe ngqo phakathi kweenduli zethu ezimbini ezidumileyo, iPiramida neKalvarija. Zombini zifikeleleka ngokulula kwaye ngaphezulu ungakonwabela enye yeembono ezintle kakhulu zesixeko. Malunga ne-5km ukuya emazantsi ungandwendwela iPohorje, ekukuphela kwayo ityathanga lentaba elilisilicate eSlovenia. Indalo yayo ephefumlayo nengonakaliswanga itsala abantu kwihlabathi liphela. Inika amathuba amaninzi okuhamba intaba, ukuhamba kwe-nordic kunye ne-adrenaline junkies inokuthatha uhambo lokukhwela ibhayisekile yeentaba. Ngexesha lasebusika, iPohorje yeyona ndawo ilungileyo yokutsiba, hayi eMaribor kuphela, kodwa naseSlovenia. Rhoqo ngonyaka, iGolden Fox-FIS Ski World Cup for Women iqhubeka ePohorje kwaye itsala abantu, ngakumbi abathanda ukutyibiliza ekhephini abavela kwihlabathi liphela.
Eyona venkile iphakamileyo yekofu eMaribor ibizwa ngokuba yiLuft 360° ebonelela ngepastry egqwesileyo, iziselo kunye nembono ye-360° yaseMaribor.
Ungandwendwela iVinag Wine cellar - enye yezona ndawo zinkulu kunye nezindala zewayini eYurophu. Ineetonela ezingaphantsi komhlaba eziyi-2,1 km ubude kunye nommandla opheleleyo we-15.000m2.
Ukuba ungumthandi wembali ngokuqinisekileyo kufuneka undwendwele iLent, eyona ndawo indala yesixeko kunye nekhaya leyona mdiliya indala ehlabathini. Kukho izinto ezininzi ezinomdla kwi-Lent, umzekelo zonke iinqaba zokukhusela (i-Židovski stolp - i-Jewish Tower, i-Vodni stolp - i-Water Tower, i-Sodni stolp - i-Judgment Tower kunye ne-Čeligijev stolp - i-Tscheligi Tower).
IMaribor sisixeko esinemvelaphi yembali enomdla kwaye kufanelekile ukutyelelwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Tara
Ndihlala kufutshane, ngoko ke ndiza kufumaneka kakhulu kwindawo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Center